ज्वालादेवीले राजतन्त्र माग्दा बाबुरामले मुस्कान दिए – YesKathmandu.com
सोमबार २७, पुष २०७२
काठमाडौं, २७ पुस । राजतन्त्रका कट्टर आलोचक पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजतन्त्र फर्काउने अभियान लाग्न एक सर्वसाधरण महिलाले सार्वजनिक स्थलमै आग्रह गरेकी छिन् । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राप्रपा नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पनि पुगेका थिए । भट्टराई पुगे लगतै काठमाडौं बौद्धकी ज्वालादेवी ज्ञानुचण्डीले भनिन् ‘डाक्टर सा’व देश वर्वाद भयो, तपाईको गणतन्त्र देशलाई फापेन, फेरी राजतन्त्र ल्याउनु परयो ।’
कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापासँग भलाकुसारी गरिरहेका बेला ज्वालादेवीले यस्तो आग्रह गरेकी थिइन । ज्वालादेवीले एकोहोरो राजतन्त्रको माग गर्न थालेपछि भट्टराईले मुख त खोले तर बचन खोलेनन् । मिठो मुस्कानबाट उनले जवाफ दिए ।
ज्वालादेवीले राजतन्त्रका पक्षमा उभिन भट्टराईलाई आग्रह गरेपछि राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले हुटिङ समेत गरेका थिए । तर भट्टराईले भने कुनै मुख खोलेनन् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिए ।
‘२० बर्षअघि देशकै ठुलो मान्छे हुन्छेउ भन्दा बिद्यादेवीले पत्याइनन्’
कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता वितरणको विवाद टुङिगयो
प्रधानमन्त्री कोइराला र गच्छदारबीच गोप्य वार्ता